सरकारले केही पनि गरेन भन्ने मलाई लाग्दैन- सुरेन्द्र पाण्डे - Deshko News Deshko News सरकारले केही पनि गरेन भन्ने मलाई लाग्दैन- सुरेन्द्र पाण्डे - Deshko News
ठूलो जनसमर्थनसहित बनेको यो सरकारको आलोचना किन भइरहेको होला ? सरकारले कतिपय काम बजेटमार्फत ल्याउँछ या नीति तथा कार्यक्रममार्फत ल्याउँछ । कतिपय निर्णयमार्फत पनि ल्याउँछ । र, कतिपय ‘अनगोइङ प्रोग्राम’हरूलाई सरकारले संशोधन तथा थपघट गरेर पनि अगाडि बढाउने काम गर्छ । यसपालि गत जेठ १५ मा बजेट आयो । हामी मंसिरको २३ गते यो कुराकानी गरिरहेका छौँ । यसअवधिमा सरकारका केही प्रयास राम्रा देखिन्छन् । जस्तो, गएको बर्खेअधिवेशनमा केही महत्वपूर्ण विधेयकहरू पारित भएका छन् । यो संविधान जारी भएको दुई वर्षभित्र अर्थात गत असोज २ गतेभित्र मौलिकहकसँग सम्बन्धित कानुनहरू बन्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो । छोटो समयमा हामीले १९ वटा ऐन पारित ग¥यौँ । तर, यो कुरा जनतालाई त्यति मतलबको विषय हुँदैन । भोलि यसको प्रयोग गर्दा जनताले मौलिक हकको लाभ अवश्य लिन सक्लान् । तर, आमजनताले यतिवटा विधेयक पास गरेको कुरा उपलब्धि हो भनेर भन्दैनन् । बाटो बन्यो कि बनेन, खानेपानीको सुधार भयो कि भएन ? भौतिक पूर्वाधारको सुधार कसरी भयो ? या अन्य सेवासुविधा प्रदान गर्ने कुरामा सरकारले के काम ग¥यो भन्ने बढी जनताको सरोकारको विषय हुन्छ । यो सरकारप्रति जनताको ठूलो अपेक्षा पनि छ । सरकारले पनि ठूलो आशा जगाइदिएको छ । स्वयम् मन्त्रीहरूले नै पनि कतिपय सन्दर्भमा सरकारसँग दुईतिहाइ छ, अब तपार्इंहरू किन चिन्ता गर्नुहुन्छ भन्दिँदा अब भोलिदेखि नै चमत्कार हुन्छ कि भन्ने मान्छेलाई लागेको हुनसक्छ ।